नेपाल यसरी राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ है – BRTNepal
नेपाल यसरी राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ है
रामप्रसाद खनाल २०७७ जेठ २८ गते ९:१४ मा प्रकाशित
हामी सबैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा नेपाल खत्तम भयो, बर्बाद भयो । हामी हरेकका मुख मुखमा झुन्डिएको छ यो कुरा । हुन पनि यहाँ भन्दा बढी बिग्रिने के नै ठाउँ हुन्छ र ? भन्न पनि पर्‍यो, कसै न कसैलाई आशा, विश्वास गर्न पनि पर्‍यो तर आशा र विश्वास गरिएकाहरू जब सत्तामा जान्छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका उखान दोहोरीएका छन । सरकारमा जानु अगाडि आकाशका तारा झार्छु, जुन नै टिपेर ल्याउँछु जस्तो गर्ने र बतासे सपना बाँड्ने कोइरालाहरू, ओली, प्रचण्ड, देउवा, बाबुराम, माधव, झलनाथ, देखी राजाबाट मन्त्री परिषद्को अध्यक्षमा झरेका तत्कालीन राजा सम्म सबै धेर थोर दोषी छन् यसमा कसैको दुई मत नहोला ।
विगत सम्झेर, पछुताएर वा ती कान चिरेका जोगीहरूलाई गाली गरेर मात्र बस्ने कि अब विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर, ती गल्ती करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
नम्बर – १
पढ्ने विद्यार्थी पढ्न भनेर स्कुल जान्छ तर एउटा पार्टीको झन्डा बोक्छ, नेताका पछाडि दौडिन थाल्छ, आची राम्रोसँग धुन नजान्दै उ आफूलाई नेता भएको भ्रम पाल्छ, राजनीति थाल्छ अनि उसको भविष्य के हुन्छ ?? के यस्तो पनि राजनीति हुन्छ र ? विद्यार्थीको काम राजनीति हो र ??
नम्बर – २
सरकारी होस वा निजी क्षेत्र । स्कुल क्याम्पसमा पढाउने शिक्षक, प्राध्यापकहरू सङ्घ सङ्गठन खोलेर वा दलमा लागेर राजनीति गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरौँ । उनीहरूलाई काबिल शिक्षक, प्राध्यापक बनाऊँ । पढाउन मात्र लगाऊँ । ताकी उनीहरूबाट विद्यार्थीले शिक्षा मात्र लिन पाउन ।
नम्बर – ३
जनताको करबाट तलब सुविधा खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको काम राष्ट्र र जनताको सेवा हो । यिनलाई राजनीति गर्नवाट रोकौँ । कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीतिमा समवेस भएको पाइए जागिर बाट हटाउने नियम बनाऊँ त यसो मात्र गरियो भने नेपालमा सरकारी काम काज कति प्रभावकारी हुने छ । जनता एउटा काम को लागि पचास पटक कार्यालय धाउन र रुन पर्ने छैन । कर्मचारीलाई नियम कानुनमा बाँधौँ, जिम्मेवारी बोध र जबाफदेही गराऊँ । जनताका अधिकांश काम अरू देशमा जस्तै एउटै कर्मचारीको टेबलबाट फाइनल गर्न र हुन सक्ने जबाफदेही बनाऊँ ।
नम्बर – ४
प्रहरी र सेना जस्ता संवेदनशील सुरक्षा निकायको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाऊँ । नेताको वा मन्त्रीको ढोका सम्म पुग्ने बाटा बन्द गरौँ । चेन अफ कमान्ड अनुसार चल्न दिऊँ चलाऊँ । कार्य सम्पादन र परिणामका आधारमा सरुवा, बढुवा हुने प्रथा कायम गरौँ । योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गरौँ । भनसुन कसैले गरे गराए स्वतह अयोग्य हुने प्रथा बसालौँ त यी निकाय कति प्रभाकारी हुने छन् ।
नम्बर – ५
एउटा पिएन हुन योग्यता चाहिने तर जिएम हुन पार्टी, नेता, वा तिनको भरौटे भए मात्र हुने ?? राजदूत भएर विभिन्न देशमा गएर देशको प्रतिनिधित्व गर्न कुनै योग्यता नचाहिने ?? सरकारी संस्थान, निकायको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख हुन कुनै योग्यता, क्षमता, अनुभव नचाहिने ?? यस्तो पनि हुन्छ ? त्यसै डुबेका छन् हाम्रा ४३ वटा राष्ट्रका गौरव संस्थानहरू, उद्योगधन्दा र कलाकारखानाहरु ?? त्यसै बेकामे भएर बसेका छन् नेपाली राजदूतहरू ?? राजदूतको काम राज्यको तलब भत्ता खाएर विदेशमा बसेर रिबन काट्ने मात्र हो ?? यस्तो अन्यत्र कहीँ हुन्छ र ??
योग्यता, क्षमता, अनुभवको मापदण्ड बनाऊँ – सरकारी संस्थान, निकायको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख हुन वा राजदूत भएर विदेश जान । उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ आवधिक रूपमा । सोही आधारमा, नतिजाका आधारमा निरन्तरताको कुरा गरौँ । अहिले जस्तो पार्टी, नेता, वा तिनको भरौटे भए मात्र हुने पद्धति सच्याऊँ । परिवर्तन र सफलता सम्भव छ । उदाहरणको लागि घाटामा गइरहेको बिद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङले कसरी फाइदामा ल्याए । बिद्युतमा कसरी सुधार भयो वा लोडसेडिङ आतङ्क कसरी अन्त भयो ? यही काफी छैन र बुझ्न ??
नम्बर – ६
नम्बर – ७
नम्बर – ८
नम्बर – ९
हेर्नुस् त हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्ने दले, नेता, कार्यकर्ताको आजको अवस्था । मालदार भनिने ठाउँको कर्मचारीको अवस्था । तिनका महल, गाडी, बैङ्क ब्यालेन्स, लगानी । मुलुकलाई टाट पल्टाएर यिनीहरूले कसरी कमाऊ धन्दा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा तिनीहरूका रहन सहन सबै कुराले छर्लङ्ग पार्छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्याय क्षेत्र भनौँ वा सुरक्षा क्षेत्र वा अरू । सबै क्षेत्रमा ब्रम्हलुट छ । केही मान्छे धनी र देश तन्नाम हुने क्रम जारी छ । राजनीति व्यापार भएको छ ।
नम्बर – १०
नम्बर – ११
नम्बर – १२
पहिला जस्तै अब गाउँघरहरू, पाखा पखेराहरू, खेतबारीहरू उर्वर बनाउनै पर्छ यो कुरा हामीलाई कोरोना भाइरसले पनि अलिकति सिकाएको छ । बेला बेला हुने नाकाबन्दी, विदेश बाट फर्किने बन्द बाकसका लासहरू देखी रोग व्याधि, विषादी धेरै कुराले हामीलाई भन्दै छ, हाम्रा परिवारजन हरूलाई भन्दै छ – सहरका बन्द कोठाहरू मा मात्र नबस । गाउँ पनि पस । त्यहाँ पनि बस । खेतबारी, पाखो पखेरोमा पनि पस । एक हल गोरु, एउटा दुहुनो भैँसी, एउटा गाई, केही बाख्रा बाख्री, कुखुरा, हाँस पाल । आफ्नै पाखो पखेरोमा तरकारी रोप, खाद्यान्न, खेती सुरु गर । दूध, दही खाऊ, साग सब्जी खाऊ, कृषि नै आत्म निर्भर हुने अचुक उपाय र जीवन पनि हो । हामीले यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ यदि बाँच्ने हो भने होइन भने कोरोना पछि फेरी उहिचाला दोहोर्याउँ सहर पसौँ । अर्को कोरोना पर्खिऊँ ।
नम्बर – १३
कृषि र पर्यटन लाई केन्द्रमा राखौँ । हिमाल, पहाड, तराइ सबै तिर कृषि र पर्यटन लाई मध्यनजर गरेर योजना निर्धारण गरौँ । माथि उल्लेखित बुँदाहरू अनुसार यदि हामी समाधानका उपाय खोज्दै जाने हो भने देश बन्न सम्भव छ । देश बनाउन सकिन्छ । मलाई यस्तो लाग्छ । तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्यो कून्नि ?